सडक खन्दा दुई गाउँ भासिए : १३७ परिवार १६ दिनदेखि जंगलमा अलपत्र!!!पीडितहरु कन्दमूलले छाक टार्दै ओडार र रुखको ओत लागेर रात काटिरहेका छन् । - dautarimedia.com
सडक खन्दा दुई गाउँ भासिए : १३७ परिवार १६ दिनदेखि जंगलमा अलपत्र!!!पीडितहरु कन्दमूलले छाक टार्दै ओडार र रुखको ओत लागेर रात काटिरहेका छन् ।
बझाङ — गाउँमुनिबाट खनेको सडकले बस्ती भासिएपछि बाजुराको दुर्गम हिमाली गाउँपालिकाका दुई गाउँका १ सय ३७ परिवार विस्थापित भएका छन् । १६ दिनदेखि जंगलमा बसिरहेका उनीहरू कन्दमूलले छाक टार्दै ओडार र रूखको ओत लागेर रात काटिरहेका छन् ।हिमाली–४ को फैती गाउँका ४० र वडा ५ को क्युडीका ९७ परिवार बिचल्ली परेका हुन् ।
ओतको अभावमा रातभर आगो बालेर बस्ने गरेको, भोक मेटाउन जंगली सागपात, सिस्नु र कन्दमूल खाएर बस्नुपरेको स्थानीय ज्ञानी बुढाले बताए । ‘भोकै बस्न नसकेर सिन्नु कन्जडा (सिस्नु आदि कन्दमूल) खाएर बसिरहेका छौं । हामी ठूलो विपत्तिमा परेका छौं,’ उनले भने । खोलाको धमिलो पानीले प्यास मेटाउनुपरेको छ । पहिरोका कारण जंगलमा बस्नुपर्दा महिला र बालबालिकालाई बढी समस्या भएको विस्थापित परिवारकी मनसरी बुढाले बताइन् । ‘खाने गाँस छैन । बालबच्चा भोकभोकै छन् । खुला ठाउँमा बस्नुपर्दा सबैभन्दा बढी हामी महिलालाई समस्या भएको छ,’ उनले भनिन् । ३ सय ५० महिला र बालबालिकासहित ६ सय जना विस्थापित भएका हुन् ।
Previous: तीन दिन नेपालको धेरैजसो स्थानमा धेरै वर्षा हुने..offical report
Next: काठमाडौंमा भूकम्प आएपछि भागाभाग, आज दिउसो भुकम्प आउन सक्ने भन्दै सचेत रहन भुकम्प मापन केन्द्रको अपिल